Akụkọ - Valves maka nnukwu hydrogenation usoro
Teknụzụ hydrogenation maka mmanụ ala bụ usoro dị mkpa na ngwaahịa mmanụ, gbanwetụrụ ma mezie mmanụ dị ukwuu. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike melite omimi nke usoro nke abụọ maka mmanụ mmanụ na ọnụego mgbake nke ọkụ hydrocarbon, kamakwa ịbawanye mmanụ mmanụ mmanụ ma belata mmetọ gburugburu ebe obibi. Ya mere, hydro ọgwụgwọ, hydro cracking ma ọ bụ Residue hydro ọgwụgwọ na usoro hydrogenation ndị ọzọ abụrụla akụkụ dị mkpa nke ngalaba nhazigharị. Hydrogenation Unit dị na klas nke ihe ọkụkụ A, ọ bụ isi ọrụ teknụzụ bụ oke okpomọkụ, nrụgide dị elu, mgbanwe hydrogen. Hydrogenation nnukwu nrụgide valvụ bụ: teknụzụ dị elu, ihe achọrọ siri ike, nchekwa na ntụkwasị obi.
Valves maka hydrogenation dị elu nwere àgwà ndị a, na mgbakwunye na ọrụ nke valvụ nkịtị:
Ọ na-ewepụ ihe mgbapụ na-agba ọsọ nke ọkara iji hụ na arụmọrụ nke valvụ ahụ, ụdị njikọ ahụ na azuokokoosisi na-etinye aka na nrụgide akara, na agbụ, mgbanaka akara na mgbanaka anọ, wdg na-agụta kpamkpam dị ka EN 12516-2 na- zere ịdị ọcha.
Ahụ mmadụ nwere nrụgide nrụgide n'okpuru usoro ọrụ ya na ngwanrọ nyocha ANSYS, na akuku nke mpaghara nrụgide na-eduzi nyocha nrụgide nke ihe nkiri ahụ iji hụ na nrụrụ nke ahụ, iji zere ịpụpụ n'ime.
Mbukota bụ graphite dị ọcha (ọdịnaya carbon dị ọcha ≥95%) na mpempe igwe anaghị agba nchara ọla kọpa sitere na ụlọ ọrụ US GARLOCK. Njupụta nke mgbanaka graphite emego bụ 1120kg / m3. Na ngwugwu niile nwere ihe mmebi mmebi. Ọdịnaya nke nzacha ikike chloride bụ <100ppm nke nwere njigide, mmanu na ihe mgbakwunye ndị ọzọ, iji zere mmebi nke azu site na CI na ihe mgbapụta nke ndị na-ajụ ase.
Usoro nkedo nke akụkụ nrụgide bụ na ndabere nke usoro nkedo nke nyocha nke nnabata, nke nwere 100% nyocha na-enweghị mbibi. Ọkara nke ọkara nke ihe nkedo kwekọrọ na ihe achọrọ nke hydrogenation dị elu na-enwekwa okpomọkụ dị elu; Machining na nzukọ na-nditịm mmanye nhazi na nzukọ usoro.
Nha 2 “~ 24”
Ogo Klas 600 ~ Klas 2500
Standardkpụrụ nhazi API 600, API 6D, BS 1873, ASME B16.34
Ule & nyocha API 598, API 6D, ISO 5208, ISO 14313, BS 5146
Isi ihe Ngwongwo carbon, igwe anaghị agba nchara, alloy steel, steel duplex
Ọrụ Wheelkwụ aka, Gear, Motor, Pneumatic
Cheta na: The nha nke Oghere Usoro valvụ ejikọta Flange nwere ike e mere dị ka ndị ahịa chọrọ.